MAROANTSETRA : Mpandeha sambo miisa 02 nahatrarana vola sandoka mitentina 180 000 Ariary
Misesisesy ny fahatrarana vola sandoka any amin’ny Faritra maro, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo iny. 29 octobre 2019
Ankoatra ny teto an-drenivohitra sy ny tao Sambava dia nahazoana loharanom-baovao mahakasika izany ihany koa ny tao Maroantsetra, Faritra Analanjirofo iny. Loharanom-baovao voaray avy amin’olona tsara sitra-po hatrany no nahafantarana fa misy vola sandoka miparitaka ao an-tanàna. Avy hatrany dia nidina ifotony ny Zandary tao an-toerana nijery ny raharaha.
Nandritra ny fanadihadiana mahakasika izany dia fantatra fa misy olona roa mampiahiahy nandeha tany Toamasina nandray sambo. Tonga dia nampandrenesina haingana ny tao amin’ny Borigady ao amin’ny seranan-tsambo tao Toamasina ka nanao ny fisavana teo am-pahatongavan’ny sambo. Vokany, olona roa no nahatratrarana vola sandoka roa alina Ariary miisa 09. Ao anatin’ny famotorana lalina tanteraka ny zandarimaria ao an-toerana amin’izao fotoana izao.